Muxuu Kabtan Sergio Ramos bartilmaameedsanayaa marka ciyaarista kubadda cagta dib loogu soo laabto? – Gool FM
Muxuu Kabtan Sergio Ramos bartilmaameedsanayaa marka ciyaarista kubadda cagta dib loogu soo laabto?
(Madrid) 29 Abril 2020. Kabtanka Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa bartilmaameedsanaya inuu ku guuleysto koobab xilli ciyaareedkan, laakiin wuxuu diyaar u yahay inuu sugto inta lagu soo laabanayo ciyaarista kubadda cagta taasoo loo hakiyey faafaha Coronavirus.
“Qof walba caafimaadkiisa qatar lama gelin doono, waxaan rajeynayaa inaan markale ciyaaro oo aan ku soo laabto tartammada oo aan ka ciyaaro La Liga iyo Champions League.” ayuu Ramos u sheegay Jariiradda AS.
“Waxaan u baahanahay inaan xilli ciyaareed ku dhammeeyo anigoo horyaal ah, laakiin waa inaan marka hore sugno dadka wax walba ka yaqaan arrintaan si ay u gaaraan go’aannada ku habboon.”
Dalka Spain waxaa si xun uga dillaacay xanuunkan loo yaqaan ‘coronavirus’, iyadoo la soo wariyey in ka badan 232,000 oo kiisas ah iyo dhimashada oo kor u dhaaftay 23,800.
Ciyaaryahanka Kooxda Man United ee Luke Shaw oo magacaabay xiddiga ugu adag oo uu wajahay
Manchester United oo markaan u weecatay Weeraryahanka ka tirsan Kooxda Bayer Leverkusen